Ahoana ny fomba hizarana ny efijery misy ny fitaovanao amin'ny fitaovana hafa | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | Fampianarana sy torolàlana
Iza no mbola tsy nahazo antso avy amina namana na mpianakavy hamaha olana amin'ny fitaovany? Manomboka amin'ny fomba fampidinana fampiharana amin'ny iPhone ka hatramin'ny fomba famolavolana Mac amin'ny fanovana ny sary an-tsary amin'ny iPad-nao. Ny marina dia izy roa iOS toy ny macOS dia natao tamin'ny fomba iray tena intuitive, ary mahalana vao mipoitra ny fisalasalana raha mikorontana amin'ny rafitra fiasa mandritra ny fotoana fohy ianao.
Fa raha marina fa misy fisalasalana hitranga, maninona raha. Mba hanaovana izany, ary tsy hiankina amin'ny antso an-telefaona foana, hampianatra anao izahay ny fomba fizarana ny efijery an'ny iDevice na Mac miaraka amin'ny olona rehetra tianao hamahana ny olana mifandraika amin'ny fitaovan'ny paoma lehibe.
1 Ny fototra sy ny rudimentary indraindray no tsara indrindra: FaceTime
2 Hizara ny efijery iDevice amin'ny Mac
3 Atsipazo amin'ny Mac hafa ny efijery Mac anao
Ny fototra sy ny rudimentary indraindray no tsara indrindra: FaceTime
Raha manana fitaovana roa ianao dia afaka manandrana mamaha ny olan'ny namanao amin'ny alalany FaceTime. Ho fanampin'izay, ho tombony fanampiny, amin'ny tanana iray (na amin'ny tripod) dia azonao atao ny mihazona ny iDevice izay hiantsoanao raha miaraka amin'ilay iray hafa ianao dia afaka manao izay rehetra ilainao amin'ny fitaovana hafa.
Tsara izany satria ilaina indraindray ny mahafantatra ny fomba fanaovana azy fihetsika sasany izay tsy idiran'ny efijery ihany toy ny: mametraka fitaovana ao amin'ny DFU na manokatra ny multitasking ny iPad amin'ny alàlan'ny fihetsika multitouch.
Etsy ankilany, manana ny lesoka izy: raha samy tsy manana ny mpandefa na ny mpandray fifandraisana Internet tsara, hiseho manjavozavo ny sary ary noho izany ny sary dia tsy hahomby loatra. fifindran'ny Ary amin'ny farany, mety tsy hanampy ny namanao hamaha ny olana mahazo azy ireo ianao.
Hizara ny efijery iDevice amin'ny Mac
Na dia tsy "fizarana amin'ny fotoana tena izy" aza, fitaovana iray hafa mahomby indrindra ny fampiasana Quicktime Player, ilay mpilalao macOS natsangana noforonin'i Apple. Ny tanjon'ity fomba ity dia ny hahafahana manoratra ny efijery amin'ny famahana olana iray. Ary avy eo misy fomba roa handefasana ny sary:
Horonantsary mivantana: Raha tsy te handefa ilay horonantsary voarakitra isika dia afaka mizara ny efijery momba ilay solosaintsika amin'ny alàlan'ny Skype na TeamViewer
Handefa horonantsary: Etsy ankilany, raha tiantsika ny hizara «écran» aorian'izay dia azonao atao ny manoratra ny efijery ary mandefa azy any aoriana raha toa ka misalasala momba io tranga io ilay olona amin'ny tranga hafa
ny dingana tokony harahina hizara ny efijery amin'ny alàlan'ny Quicktime dia toy izao
Sokafy ny mpilalao (mifanaraka amin'ny macOS sy Windows izy)
Manaraka, mankanesa any amin'ny menio File ary safidio ny safidy «Rakipeo horonantsary vaovao»
Rehefa miseho ny varavarankely toa ilay hitanao etsy ambony amin'ireo tsipika ireo, eo akaikin'ny bokotra mena firaketana dia misy zana-tsipika, kitiho eo aminy ary miaraka amin'ny iDevice mifandray amin'ny USB amin'ny solosainao, safidio ny anaran'ny iDevice anao ao amin'ny menio "Camera"
Rehefa vonona izy dia hiseho ny efijery vaovao (tery na malalaka kokoa, miankina amin'ny fitaovana sy ny orientany) izay hisehoan'ny efijery ny fitaovanao afaka segondra vitsy. Raha te hanoratra ianao dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra mena ary avy eo, rehefa vita dia tahirizo ao amin'ny solo-sainao ilay rakipeo.
Atsipazo amin'ny Mac hafa ny efijery Mac anao
Misy safidy iray hafa. Raha manana ny namanao na olona ao amin'ny fianakavianao na manana fanontaniana mifandraika amin'ny Mac-nao ianao ary manana izany koa ianao dia vintana ianao. Fa maninona Satria i Apple dia misy fitaovana antsoina hoe Fizarana efijery ó Fizaràna efijery ahafahantsika mizara ny efijery an'ny Mac.
Ny fepetra takiana amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity dia:
Asaivo velombelona ao amin'ny fizarana ilay fahazoan-dàlana fizarana fizarana anjara ao amin'ny Taratasy rafitra
Manana ID Apple manan-kery mifandraika amin'ny Mac
Raha vantany vao nanaiky ny fanekena izahay ary nampifandray ny ID tamin'ny solosainay, tonga ny fotoana hanokafanao ny rindranasa amin'ny fikarohana ao amin'ny Spotlight. Hisy sary toa izao:
Tsy maintsy miditra ny Apple ID an'ny olona tianao hizarana ny efijeryo ianao. Avy hatrany, ny mpampiasa izay itovizan'io ID io hahazo fampandrenesana ao amin'ny foibe fampandrenesana macOS anao ahafahanao manaiky na mandà ny fangatahana hizara ny efijery.
Rehefa nanaiky ianao dia hanana safidy roa:
Fanaraha-maso tanteraka: ilay olona izaranao ny écran dia afaka mifehy azy lavitra
Jereo fotsiny: ny mpampiasa ampiarahinao amin'ny efijery dia ho afaka hijery azy fotsiny
Ary farany, misy fomba hafa mora kokoa hanazavana Mizarà ny efijeryo: amin'ny alalan'ny Messages. Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambonin'ireto tsipika ireto, raha manana Apple ID manokana mifandraika amin'ny mpifanerasera aminao ianao, dia ho afaka hampavitrika haingana kokoa ny fomba voalaza etsy ambony ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hizarana ny efijery ny fitaovana amin'ny namanao
Apple dia nanatevin-daharana ny Wireless Power Consortium mieritreritra momba ny iPhone 8?